Ngwaọrụ KIngdoms - World People Technology
Ndị mmadụ World Technology
NA -efegharị n'elu FILIPPINES (4K UHD) Vidiyo 4K
Worldwa na Ndi mmadu, ọdịdị, Anya nnunu, Isiokwu. Iche., Encyclopedia, Encyclopedia
Palawan bụ iberibe paradaịs, iberibe agwaetiti jupụtara n'ọhịa anụ ọhịa, obodo ịkụ azụ mara mma na saịtị UNESCO World Heritage. Na -efegharị ụmụ anụmanụ nọ n'ihe ize ndụ na ebe nchekwa anụ ọhịa Kalawit ma ọ bụ nyocha ụgbọ mmiri Japan kpuru na agwaetiti Coron, nke a na -ewere dị ka otu n'ime ebe mmiri na -ama mma.
ỌWỤNWA KWESỊRỊ MALDIVES (4K UHD) (4K Video Ultra HD)
Worldwa na Ndi mmadu, ọdịdị, Anya nnunu, Encyclopedia
Maldives, gọọmentị Republic of Maldives, bụ obere steeti agwaetiti dị na South Asia nke dị na Oke Osimiri India. Ọ dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke Sri Lanka na India, ihe dị ka kilomita 700 (430 mi) site na ala Eshia. Ahịrị nke 26 atolls si na Ihavandhippolhu atoll dị na mgbago ruo Addu atoll na ndịda (gafee akara akara). Maldives, na -eburu ókèala ...
FLIGHT over SCOTLAND (4K UHD) - egwu na -ezu ike na ịma mma eke mara mma (vidiyo 4K Ultra HD)
Worldwa na Ndi mmadu, Anya nnunu, Encyclopedia, Encyclopedia
Scotland, obodo nke bụ ngalaba nchịkwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke United Kingdom of Great Britain na Northern Ireland, bụ mpaghara obodo nwere oke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke anụ ahụ na nke ala, ọdịbendị ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke enwere ike ịkọwapụta nke ọma ma dozie ya, ma ọ bụ gbue. (na nke a, mgbe mgbe, nke bụ akụkụ nke United Kingdom, ụdị gọọmentị ma ọ bụ gọọmentị nke onye isi ala bụ eze, ...
Flight to ICELAND (4K UHD) - Music na-ada ada na ọdịdị dị egwu (4K Video Ultra HD)
Worldwa na Ndi mmadu, ọdịdị, Anya nnunu
Iceland bụ mba agwaetiti nke dị na North Atlantic Ocean nke nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ 356 na mpaghara 991 km103 (000 sq mi), na -eme ka ọ bụrụ obodo mmadụ kacha biri na Europe.
Gbọ elu na-efe Sweden (4K UHD) - egwu izu ike na ịma mma mara mma (4K Ultra HD video)
Aha Sweden bụ Kingdom of Sweden (Swede bụ mba ugwu na Northern Europe.Ọ dịdebere Norway n'akụkụ ọdịda anyanwụ na ugwu, yana Finland na ọwụwa anyanwụ. .
Mexico 4K - egwu izu ike na vidiyo okike mara mma
A ma Mexico ama maka oke aja aja ọcha ya, ọdịdị dị ịtụnanya yana ihe ncheta oge ochie nke ihe ngosi oge hapụrụ. Enwere ebe ihe ochie nke Aztec n'obodo ochie nke dị n'etiti Mexico City. Ndị ọbịa nwere ike ịmasị ọtụtụ ọmarịcha ihe owuwu ụlọ dịka Teatro Palacio de Bellas Artes, ihe ncheta ncheta mgbanwe, katidral nke ụka Metropolitan.
Gbọ elu n'elu (DOLOMITES (4K UHD)) - Ezigbo egwu dị egwu na ọdịdị mara mma mara mma (4K Video Ultra HD)
Worldwa na Ndi mmadu, ọdịdị, Encyclopedia
Dolomites, nke a makwaara dị ka Dolomites, Dolomites ma ọ bụ Dolomites, bụ ugwu ugwu dị na ugwu ọwụwa anyanwụ Italytali. Ha bụ akụkụ nke Alps Limestone Alps wee gbatịa site na Osimiri Adige na ọdịda anyanwụ ruo na Pieve di Cadore Ndagwurugwu dị n’ọwụwa anyanwụ. A kọwara ala ugwu na mpaghara ndịda site na Puster Valley na Ndagwurugwu Sugana (:talian: Valsugana). Ndị Dolomites dị na ...
Gbagharị na Denmark (4K UHD) - egwu na-atọ ụtọ na ịma mma mara mma (4K Ultra HD video)
Denmark, na eze nke Alaeze Denmark, bụ mba ugwu na Northern Europe. Denmark n'onwe ya, nke bụ akụkụ ndịda nke mba Scandinavia, nwere mpaghara mmiri Jutland na agwaetiti nke agwaetiti 443 aha ya, nke ka ukwuu bụ Zeeland, Funen na agwaetiti North Jutland. Ejirimara ala ahịhịa dị larịị na ụsọ mmiri nwere agwaetiti, agwaetiti dị ala na ọnọdụ ihu igwe dị ala. Denmark dị ...
AUSTRIA na 8K ULTRA HD - Gaa njem kachasị mma na Austria na egwu 8K TV dị jụụ
Austria bụ obere obodo. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ọtụtụ na ọtụtụ ebe nkiri, dịka ọmụmaatụ, na Italy ma ọ bụ Gris, Austria nwere mma nke ya. Mana ị nwere ike depụta ndepụta nke ebe kachasị mma 10 kacha mma Austrian nke ekwesịghị ileghara anya mgbe ị na-eme njem n'Austria. Ka anyị lee ihe ha bụ n'ihe gbasara ọnụọgụ ndị ọbịa: Schönbrunn Obí: ọ bụ n'isi ndị njem nleta ...
ANIMAL WORLD IN 8K ULTRA HD • zingtụnanya anụ ọhịa na ọdịdị na-ada ụda 8K TV
Worldwa na Ndi mmadu, ọdịdị
Na vidiyo 8K Ultra HD a, anyị na-egosi gburugburu ebe obibi anyị, nke bụ ebe obibi maka ụdị ihe dị iche iche dị ndụ, anụmanụ, ọ bụkwa ụdị dị iche iche nke a na-enye aka na nkwado nke ndụ na mbara ala. Ngwurugwu ọ bụla na-arụ ọrụ pụrụ iche na mbara ụwa anyị. Mbibi nke nwayọọ nwayọọ nke ụdị dị iche iche nke ụmụ anụmanụ na anụmanụ dị mkpa karịa ka anyị chere n'echiche n'ihi na ọ ga - eduga na ...
Agba agba 8K ULTRA HD - Anụmanụ mmiri kacha mma 8K maka izu ike & Music na-atọ ụtọ
OCAN agba bụ ihe nkiri 8K mara mma ma zuru ike banyere ndụ mmiri na anụmanụ. Na vidio a, anyị nwere ike ilele ụmụ anụmanụ mmiri si n'akụkụ ụwa niile, nwere agba mara mma na ụdị dị iche iche maka oge izu ike ma ọ bụ oge izu ike. A na-eme atụmatụ na pasent 70 na 80 nke ihe niile dị n'ụwa nọ n'okpuru oke osimiri, oke osimiri nwekwara 99 ...
Ezumike dị mma. Na oké ntụrụndụ bụ ọbụna ka mma ... na ndị ọzọ fun 😎
Ebe mara mma nke mbara ala site na nnụnụ anya 🚁📷 16
Osisi nnụnụ 🌴🦜
Peru nke 8K HDR 60fps (FUHD)
Anyị chọrọ ịkọrọ onye ọ bụla otu anyị si ahụ ụwa na 8K. Peru 8K HDR na-enyocha ndị mmadụ na ala nke Peru. Emere ndekọ a na nhazi ya.
Nnụnnụ ndị kachasị ịtụnanya n'ụwa 8K ULTRA HD - lada Egwu na Nature Na-ada ụda 8K TV
Nnụnụ so n'ìgwè nke vertebrates na bụ ụdị nwere nku nke na-enyekarị ha ohere ife efe, n'agbanyeghị na enwekwara nnụnnụ na-efe efe. Ke ofụri ofụri, nnụnụ ofufe, na-awụlikwa elu, na-eje ije ma ọ bụ igwu mmiri na ịrịba ọsọ na….
UFUA NA FRANCE (4K UHD) - Egwú na-ekpori ndụ na ọdịdị mara mma - vidiyo 4K UltraHD
France dị na Western Europe, France dị ebube ama ama maka isi obodo ịhụnanya nke Paris na ụwa, yana ọtụtụ ụlọ ụkpụrụ ụlọ ama ama na ama njem nleta na mba ahụ dum. Bịanụ na France na njem French gaa ileta ọmarịcha obodo Rome, nwee mmasị na ndagwurugwu mara mma nke Morienne, ... Njem French na-abụkarị nhọrọ dị ukwuu maka ndị njem hụrụ n'anya ...
Oman di egwu na 4K UHD - Ebe nrụọrụ kachasi mara mma nke mba Arab
Jiri obi uto mara ihe nke kachasi mma nke Oman! Ezigbo obi ụtọ, egwu dị omimi nke na-eso nlegharị anya dị mma maka izu ike, ntụgharị uche na nrụgide nrụgide. Anyị na-atụ anya ime ka ị nwee mmasị na ebe nkiri dịka: The Magnificent Wadi Ghul (03: 10), (44: 20) The Wredi Shab Wadi na Al Fanal Village (08: 31) Mmiri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ nke obodo oge ochie nke Qalhat (06:22), (01: 46: 20) A ebube nke uwa - a karst ọma ...
Costa Rica 4K - Egwú na-atọ ụtọ na vidiyo mara mma
Costa Rica bụ obere obodo dị na Central America, isi obodo ya bụ San Jose. N'agbanyeghị obere ya, Costa Rica Costa Rica (Spanish Costa Rica (Spanish ka bụ otu n'ime mba ndị ahụ bụ mpaghara nke nwere oke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke ala, ọdịbendị ma ọ bụ akụkọ ntolite, nke enwere ike ịkọwapụta ma dozie ya, ma mebie (na n'okwu a, otutu mgbe mpaghara nke nwere ochichi, nke aru-ala, omenala ma obu ...
Flight over DUBAI (4K UHD) - Egwú na-ekpori ndụ na vidiyo mara mma mara mma - 4K Ultra video
Worldwa na Ndi mmadu
Dị ka otu n'ime alaeze asaa ahụ, ala Alakụba nke Emir nke United Arab Emirates (UAE) na-achị maka mkpụmkpụ, amaara Dubai n'ụwa niile maka ọtụtụ ọmarịcha ije ya, skyscrapers na ebe azụmahịa dị egwu. , ịma mma nke ụlọ nkwari akụ kpakpando 7 ... kamakwa mkpesa nke Gold Markets, obodo ochie bụ nnukwu obodo nke ndị bi na ya na-arụsi ọrụ ike ...
Worldwa na Ndi mmadu, Isiokwu. Iche.
Без рубрики, Worldwa na Ndi mmadu, Isiokwu. Iche., Encyclopedia
Worldwa na Ndi mmadu, Isiokwu. Iche., Encyclopedia
Kedu ndị tankị septic ndị a na ihe ha bụ
Ọ bụrụ na ị na -arụ ụlọ nke aka gị, mgbe ahụ, n'ọnọdụ ọ bụla, ị chere maka mmejuputa ụlọ ọrụ nsị mmiri, oke olu, planar ma ọ bụ usoro iwu ahịrị nwere ala, n'elu ala na (ma ọ bụ) n'okpuruala, nwere ibu. -nwe, na oge ụfọdụ, na -ekpuchi ihe owuwu ụlọ yana yana eriri ọkpọ maka iwepụ mmiri na -asọfu mmiri Osimiri na -asọ asọ mmiri - na -agagharị ...
Nri Italiantali: ọdịnala, nri a ma ama nke ị ga -anwale
Ọ bụ ezie na aha gọọmentị Italy bụ Italian Republic (Italiantali guzobere onwe ya dị ka otu steeti naanị na narị afọ nke XNUMX, nri Italiantali malitere na narị afọ nke isii BC. Nke a, ị na -ahụ, na -ada ụda. maka nka nri nri ha, nke gụnyere iji naanị ihe eji achọ mma, dị ọhụrụ, kacha mma dị nso, ...
Saịtị ọrụ: njide ndị ahịa mbụ metụrụ aka
Без рубрики, Iji nyere webmaster aka, Worldwa na Ndi mmadu, Yandex na Google gbara ajụjụ, Isiokwu. Iche.
Ụlọ ọrụ ndị na -anaghị ere ngwongwo, mana na -enye ụmụ amaala na ndị otu ọrụ otu ndị ejiri ụma na -ahazi ihe omume ha iji nweta ebumnuche nkịtị. A na -eji okwu ahụ eme ihe na -ezo aka na otu mmekọrịta na -ekesa arụmọrụ, na -ejikwa Ịntanetị ịchọta ndị ahịa, mana ụlọ ahịa dị n'ịntanetị anaghị adabara ha - ha anaghị ere ahịa. Mgbe ụfọdụ ị chọghị ọtụtụ ibe. Ihe ka mkpa bụ idoanya ...
Klops: Koenigsberg, eyịm, snellklops
Worldwa na Ndi mmadu, Isiokwu. Iche., Encyclopedia, Encyclopedia
Kaliningrad bụ obodo mara mma, nnukwu mmezi, okwu ejiri mee nkebi ahịrịokwu na mpaghara dị iche iche nke ọrụ mmadụ, ya bụ, ndị bi na ya, dị ka a na-achị, anaghị etinye aka na ọrụ ugbo, nke ruo 1946 bụ oge enweghị usoro. nha, nke akụkọ ihe mere eme n'ọtụtụ omenala pụtara otu okirikiri oge mgbanwe (oge opupu ihe ubi, ọkọchị, ụbịa, udu mmiri) bụ Königsberg Prussian ma bụrụ akụkụ nke ...
Sọseeji. Russian na German: onye na -emeri?
Ebee ka nnukwu mpaghara agbụrụ dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe, aha akụkọ ihe mere eme nke ala Slavic East, soseji si na Russia pụta? Kedu ka sausaji German na Russia si bikọ ọnụ na Russia ma ọ bụ Russian Federation (RF), steeti dị na Eastern Europe na North Asia? Kedu sausaji ndị nna nna anyị riri na ego ole soseji dị? Anyị na -akpọ gị òkù ka ị kwuo okwu ... Soseji abụrụla akụkụ dị mkpa nke nri anyị. Onye…
Tantra Yoga: Ike ise nke Chukwu nke Shakti
Yoga bụ echiche dị na ọdịnala ndị India, n'echiche sara mbara, nke pụtara otu usoro ime mmụọ dị iche iche, nke mmụọ na nke anụ ahụ mepụtara n'akụkụ dị iche iche nke Hindu na Buddha na ebumnuche - echiche yoga na ọdịnala India, n'ụzọ sara mbara, pụtara a setịpụrụ omume ime mmụọ, echiche na anụ ahụ dị iche iche etolitere n'ụzọ dị iche iche okwu na -edoghị anya nke nwere ike ịpụta: Ntuziaka nke vector - ...
1 2 3 ... 5 Gaanụ n'ihu "
Tinye edemede na -enweghị ndebanye aha
Akwụkwọ akụkọ anyị:
Anyị nọ na instagram
Categories Họrọ isi Без рубрики Iji nyere webmaster aka Worldwa na Ndi mmadu Yandex na Google gbara ajụjụ ọdịdị Osisi eburu ụzọ kọwaa n'akwụkwọ Species Plantarum Anya nnunu Arụrụ n'ụlọ Isiokwu. Iche. Peeji nke uru Anụmanụ anụmanụ a kpọrọ aha mmadụ Ahụhụ ahụhụ na-akpọ aha mmadụ Osisi osisi aha ụmụ mmadụ Flora nke asia Flora nke North America Njedebe nke Australia Endemics nke China Endemics nke North America Endemics nke South America Endemics nke Japan Encyclopedia Encyclopedia
Tinye post na ndebanye aha:
Nzuzo na kuki Policy: Saịtị a jiri kuki. Site n'ịnọgide na-eji saịtị a, ị kwenyere na ojiji ha.
Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ, gụnyere maka ijikwa kuki, ebe a: Iwu kuki
Ngwaọrụ KIngdoms © 2021
Isiokwu si	WP egwuregwu
Loading kwuru ...
Zipu ikwu ...